Semalt: Indlela ukuqeda amahhashi iTrojan
Lokho abantu abakubhekisela njengehhashi leThrojani noma ngokumane nje iThrojani yi-malware, okuzenza sengathi kube yinto eqotho yokukhohlisa umsebenzisi ukuyilayisha. Kungathatha uhlobo lomdlali wezindaba, ifayela elixhunywe kwi-imeyili, ikhasi lewebhu, noma isicelo se-smartphone. Abasebenzisi bangathola ulwazi oluqinisekisayo kakhulu, okwanele ukuba bavule, okwenza kube khona ukufaka i-malware. I-Trojans ingathatha ifomu lefayela. Bangase bazihlanganise njengamafayela wesithombe, amadokhumende ehhovisi, amafayela aphilile, noma imidlalo ye-intanethi.
UJulia Vashneva, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Semalt , uthi kukhona ukuhlukaniswa okuphakathi kweTrojans kanye nama-virus noma izibungu. Mayelana neTrojans, abanalo ikhono lokuziphendulela noma ukusabalalisa njengoba izigciwane noma izibungu zenza. Okwesibili, abathuthukisi babo beza nabo ngenjongo enonya ngenkathi amagciwane nezimpethu zingenzeka ngengozi noma zingenangqondo.
Yini eyenziwa yiTrojans
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, amaTrojans angathatha izinhlobo ezahlukene, futhi anakho ikhodi eyenza bakwazi ukwenza noma yini kukhompyutha. Zihlelwe ukuqala noma nini lapho umsebenzisi evuselela ikhompyutha. Uma ifakiwe, idala ukungena emuva kumsebenzisi osekude, ngokuvamile kulesi sigameko, kuhlelo olubanikeza ukulawula ikhompyutha. Kungabangela ukuvala ngaphandle komnikazi. Zonke lezi zenzo zihamba ngokuthula futhi ngasese. Bangase baze bavimbele uhlelo olulwa nokulwa negciwane ngaphandle kolwazi lomsebenzisi.
Ezinye ze-Trojans ezikhona zifaka izinkinobho, ezenza njenge-spyware eziqaphela imisebenzi yomsebenzisi ekhibhodi, ukuqapha ukusetshenziswa kwe-inthanethi, nokuqoqa ulwazi lomuntu siqu. Abanye bavumela ukufakwa kwesofthiwe ye-botnet, okuxhuma ikhompyutha namanye amakhompiyutha e-zombie alawulwa abaduni. Ama-Botnets anezici eziningi zenhloso. Akwazi ukuhlasela ukuhlaselwa kwe-DDoS (Distributed Denial of Service) ukwenza i-website yamakhemikhali, ukudala i-imeyili yogaxekile, ukukhwabanisa ama-encryptions, noma ukweba iziqinisekiso zokungena ngemvume namaphasiwedi. 8)
I-medium evamile kakhulu yokufakwa kweTrojan ngukulandwa kwe-drive-by. Kwenzekani ukuthi laba baduni bashintsha ikhodi yewebhusayithi ukulanda i-malware noma nini lapho umsebenzisi eyivakashela ngokuzenzakalelayo. Uma i-akhawunti yomsebenzisi inamalungelo okuguqula isofthiwe, lapho ilandela i-Trojan, khona-ke iyozifaka ngokuzenzekelayo.
Izitolo zohlelo lokusebenza lwesithathu zikhonza njengezindawo ezivamile lapho abahlaseli befihla iTrojans. Benza sengathi abathengisi banikeza izinguqulo ezishibhile zezicelo zeselula. Ngaphambi kokulanda nokufaka isicelo, abasebenzisi kudingeka babuyekeze amadokhumenti kanye nezimvume ukuthi izicelo zesofthiwe. Imikhiqizo ye-Apple cishe iphephile ngaphandle kokuthi umnikazi "engaphumi ejele" idivayisi yakhe.
I-Trojans inzima kakhulu ukubona. Uma omunye esho ukuthi ukhona ohlelweni lwabo, kufanele asebenzise "i-packet sniffer," ehlaziya yonke imoto ehambisana nesistimu ngenkathi ifuna noma yikuphi ukuxhumana namaseva okusolakala ukuthi angaphansi kokulawulwa kwe-cybercriminal. Noma kunjalo, kunezinhlelo ezithile zokulwa ne-virus ezanele ngokwanele ukuqeda amaTrojans.
Ukuvimbela izifo zeThrojani
Okokuqala, yenza i-akhawunti yomsebenzisi ukuthi isebenzise kuphela amalungelo ayo okuphatha ngezikhathi ezingavamile. Futhi, kufanele ukukhawulela amalungelo okufaka noma ukuvuselela isofthiwe. Sebenzisa ama-akhawunti alinganiselwe kukho konke okunye okubandakanya i-intanethi, njengoba bengakwazi ukushintsha izinhlelo zokusebenza.
Okwesibili, qiniseka ukuthi izigubhu zomlilo zihlala zisebenza kuwo wonke amanethiwekhi asekhaya. Amanethiwekhi amaningi asebenzayo afakwe izigubhu zomlilo, ngakho-ke yenza amakhadi angenantambo. Okokugcina, isofthiwe eqinile ye-anti-virus eyenza izikrini ezivame ukusiza ukuvimbela izifo. Njalo qinisekisa ukuyivuselela njalo.